QEMU 7.0 mar hore ayaa la sii daayay kuwanuna waa warkeeda | Ka Linux
QEMU 7.0 mar hore ayaa la sii daayay kuwanuna waa warkeeda
Xulka wararka oo dhan | 20/04/2022 10:00 | La cusbooneysiiyay 26/04/2022 23:00 | Aplicaciones
Maalmo ka hor sii deynta nooca cusub ee QEMU 7.0 ayaa lagu dhawaaqay, kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku socodsiiso barnaamij loo dhisay hal qalab oo qalab ah oo ku yaal nidaam leh qaab dhismeed gebi ahaanba ka duwan, tusaale ahaan, ku socodsiinta codsiga ARM ee x86 PC-ku habboon. Qaabka wax-ku-oolka ah ee QEMU, waxqabadka fulinta koodka ee deegaan go'doonsan wuxuu la mid yahay kan nidaamka qalabka sababtoo ah fulinta tooska ah ee tilmaamaha CPU iyo adeegsiga Xen hypervisor ama moduleka KVM.
Sanadihii la soo dhaafay ee horumarinta, taageero buuxda oo ku dayasho ah oo loogu talagalay 14 dhismooyin hardware ah ayaa lagu daray, tirada qalabka ku dayashada ayaa dhaaftay 400. Diyaarinta nooca 7.0, in ka badan 2500 isbedel ayaa laga sameeyay 225 horumariye.
Wararka ugu waaweyn ee QEMU 7.0
Noocan cusub ee QEMU 7.0 ee la soo bandhigay, ayaa Tilmaamaha Intel AMX wuxuu dhigay taageero ( Kordhinta Matrix Sare) laga hirgaliyay soo-saareyaasha server-ka Intel Xeon waa la barbardhigi karaa oo lagu daray waxaa lagu daray x86 emulator-ka dhismaha. AMX waxay bixisaa diiwaano cusub oo TMM "TILE" iyo tilmaamo lagu maamulayo xogta diiwaanadan, sida TMUL (Tile matrix MULtiply) ee isku dhufashada matrixka.
Isbeddel kale oo muuqda ayaa ah kaas debecsanaanta taageerada sawirada firfircoon waa la hagaajiyay nidaamka hadda jira (sawir sawir leh ayaa la sameeyay, ka dib koobi-kahor-qor (CBW) filter ayaa la mariyaa si loo cusboonaysiiyo heerka sawirka, koobiyeynta xogta meelaha uu nidaamka martida wax u qoro). Awoodda lagu galo sawir sawir leh oo kayd ah si toos ah looma bixiyo, laakiin iyada oo loo marayo dareewalka qalabka xannibaadda sawirka.
emulator ARM ee mashiinada 'virt' ayaa ku daray taageerada virtio-mem-pci, ogaanshaha topology CPU martida iyo karti PAuth marka la isticmaalayo KVM hypervisor oo leh hvf accelerator, oo lagu daray taageerada PMC Flash OSPI iyo ku dayashada darawalka SLCR ee kombayuutarka guddiga 'xlnx-versal-virt'.
Emulator-ka dhismaha RISC-V waxay ku darsataa taageerada KVM hypervisor oo ay fuliso kordhinta Vector 1.0 vector, oo ay weheliso taageerada rarida OpenSBI (RISC-V Supervisor Binary Interface) binary ee mashiinada 'spike' ee la mid ah ayaa lagu daray. Mashiinnada 'virt' ee lagu dayan karo, awoodda isticmaalka illaa 32 kombuyuutarrada processor-ka iyo taageerada AIA waa la hirgeliyay.
Ee isbeddelada kale taagan:
Ku dayashada qaab dhismeedka HPPA wuxuu bixiyaa ilaa 16 vCPUs iyo kontorool garaafyada la xoojiyay ee deegaan isticmaalayaasha HP-UX VDE/CDE.
Waxaa lagu daray awoodda lagu beddelayo nidaamka boot ee aaladaha SCSI.
Taageero lagu daray isticmaalka ilaa 4 koofiyadaha CPU, rarista muuqaal dibadda ah, oo si toos ah u soo saaraya geed aaladda xudunta bootableka ee OpenRISC naqshadaha naqshadaha ee looxyada 'sim'.
Ku dayashada qaab dhismeedka PowerPC ee mashiinada 'psers' ee la isku qurxiyo ayaa hirgeliyay awoodda lagu socodsiiyo nidaamyada martida ee hoos yimaada xakamaynta KVM hypervisor. Taageerada lagu daray qalabka spapr-nvdimm
Taageerada lagu daray XIVE2 kaaliyaha kaaliyaha iyo PHB5 ee mashiinada 'powernv' ee la isku daray, taageerada la wanaajiyey ee XIVE iyo PHB 3/4.
Taageerada lagu darey ee fidinta z15 (Qalab kala duwan oo Tilmaamaha-Facility 3) ee ku dayashada naqshadaha s390x.
Classic TCG (Tiny Code Generator) waxay meesha ka saartay taageerada martigaliyayaasha leh ARMv4 iyo ARMv5 CPUs kuwaas oo aan taageerin gelitaanka xusuusta aan toosnayn oo aan haysan RAM ku filan oo ay ku socodsiiso QEMU.
Taageerada calaamadaha amniga ee moduleka virtiofs, kaas oo loo isticmaalo in lagu gudbiyo qayb ka mid ah nidaamka faylka laga bilaabo deegaanka martida loo yahay loona gudbiyo nidaamka martida, waa la hagaajiyay.
Nuglaanta go'an CVE-2022-0358, kaas oo kuu ogolaanaya inaad sare u qaaddo mudnaantaada nidaamka adiga oo abuuraya faylal la fulin karo oo ku jira hagayaal lagu soo gudbiyo virtiofs, oo ay leeyihiin koox kale oo ku qalabaysan calanka SGID.
Finalmente hadaad xiisaynayso inaad waxbadan ka ogaato Isbeddellada iyo waxyaalaha cusub ee lagu soo bandhigay nooca cusub ee QEMU 7.0 waxaad ka hubin kartaa faahfaahinta iyo in ka badan xiriirka soo socda
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » QEMU 7.0 mar hore ayaa la sii daayay kuwanuna waa warkeeda
Ubuntu 22.04 LTS "Jammy Jellyfish" ayaa mar hore la sii daayay oo kuwanu waa warkeeda
Yandex ayaa soo saartay koodhka isha DBMS "YDB"